Accueil > Gazetin'ny nosy > Mpiaron’ny zon’olombelona : Miaro ny dahalo sy ny mpamono olona no asany
Mpiaron’ny zon’olombelona : Miaro ny dahalo sy ny mpamono olona no asany
Miteraka resabe amin’ny fiaraha-monina Malagasy ny mahakasika ny fikambanana miaro ny zon’olombelona. Raha ny zava-misy ankehitriny dia any amin’ny fonja no tena miasa izy ireny. Miaro ny jiolahy izay voafonja fa indrindra ireo mpamono olona no tena ahafantarana azy, fa indrindra ireo jiolahy na olona misazy an-taonany maro na mandrapahafatiny noho ny heloka be vava vitany.
Amin’ny asa ivelan’ny fonja koa dia misakana ny fitifirana sy ny famonoan’ny mpitandro filaminana ireo jiolahy sy dahalo mpamono olona sy mpandoro olona velona ary mpandoro trano koa izy ireny. Tsy mbola nahita teto Madagasikara ka nisy fikambanana mpiaro ny zon’olombelona niaro ireo olona notafihin’ny dahalo sy jiolahy fa ireo mpamono olona ihany no arovany. Tsy mbola nahita koa fanampiana omen’ireo fikambanana miaro ny zon’olombelona ireo ka niantefa tany amin’ny fianakavian’ny maty noho ny famonoan’ny dahalo sy ny jiolahy azy. Tsy mbola nahita koa fanampiana ireo zaza kamboty noho ny asan-jiolahy nahazo azy, na koa fanampiana ireo olona nodoran’ny jiolahy ny tranony sy ny fananany.
Mitarika resabe eo anivon’ny fiaraha-monina ity raharaha ity. Maro koa no mitaraina noho izany ireo mpitandro filaminana satria matetika rehefa misy ny fifanenjehana sy ny fifampitifirana eo amin’izy ireo sy ny dahalo na ny jiolahy dia ireto farany hatrany no ampian’ireo mpiaro ny zon’olombelona ireo.
Eo anatrehan’ny asan-dahalo izay mirongatra eto Madagasikara ankehitriny dia maro ny Malagasy no manontany tena amin’ny fihetsik’ireto mpiaro ny zon’olombelona ireto.